Midina An-Dàlamben’i Mexico Ireo Mpanohitra Hitakiana ny Fihetsehana Manoloana Ireo Mpianatra Tsy Hita Tany Amin’i Ayotzinapa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2014 18:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Nederlands, Français, Español
Olona an'aliny no nanao diabe avy any amin'ny lapan'ny filoham-pirenena nankany amin'ny kianja lehibe ao Mexico ho fangatahana ny famerenana velona fo aman'aina ireo mpianatra-mpampianatra 43 tsy hita sy ho fanoherana ny andraikitra noraisin'ny governemantam-paritra amin'izao fanjavonan'izy ireo izao, miaraka amin'ny fitavozavozan'ny valinteny nomen'ny filoha mikasika ilay heloka bevava.
Nilaza ireo mpikarakara fa olona 120.000 no nandray anjara tamin'ilay Andro Eran-tanin'ny Hetsika ho an'i Ayotzinapa tao an-tanàna, izay nokarakarain'ireo vondronà mpianatra Meksikana samihafa, raha 60.000 kosa no voaisan'ny mpitandro filaminana. Re nanerana ny vazan-tany efatr'i Mexico sy eran-tany ny tolokon'ireo mpanao fihetsiketsehana hampanjakana ny marina; nanoritsoritra ny vohikala mpitati-baovao Revolucion 3.0 fa mety ho io fihetsiketsehana io no “diaben'ny fanamelohana lehibe indrindra teo amin'ny tantara” ary nizara fampirantiana an-tsary sy feo miaraka amin'ireo fanavaozam-baovao isa-minitra nandritra ilay hetsika.
Nitranga ireo hetsi-panoherana ireo iray andro taorian'ny nisamboran'ny tafika federaly an'i José Luis Abarca, ben'ny tanànan'i Iguala taloha, sy ny vadiny María de los Ángeles Pineda, tany Mexico ny maraina vao mangiran-dratsin'ny Talata 4 Novambra 2014. Samy voatonon'ny governemanta sy ny media ho atidoha nikotrika ilay fanafihana mpianatra voalohany indrindra izy ireo, izay niafara tamin'ny aina enina nafoy sy ny fanjavonan'ireo 43 tany amin'i Ayotzinapa.
Nisy olona maro hafa nanako ny fangatahana izay novoizina tao anaty aterineto sy tany ivelany momba ny fametraham-pialan'ny filoha:
Tsy tamin'ny 5 Novambra no fotoana voalohany nahatonga ny raharahan'i Ayotzinapa hitarika hetsi-panoherana. Nampiakatra sary natambatambatra atao hoe: ” Hafatra iray ho an'i @EPN [Enrique Peña Nieto] avy amin'ny Beaux Arts” ilay mpampiasa Instagram pariscervantes roa herinandro talohan'io.
Isan'ireo lohahevitra 10 malaza indrindra tao amin'ny Twitter ireo tenifototra #AccionGlobalPorAyotzinapa (Hetsika Eran-tany ho an'i Ayotzinapa), #SiRenunciaPeña (Raha miala i Peña), ary #Abarca (ny Ben'ny tanànan'i Iguala teo aloha sady iray amin'ireo ahiahiana voalohany), tamin'ny 7 ora alina tany Meksika.